ओलीलाई प्रदिप गिरिको सुझाव, ‘महेन्द्रले जस्तो चिठी एउटा, काम अर्को नगर्नुस्’ – Karnalisandesh
ओलीलाई प्रदिप गिरिको सुझाव, ‘महेन्द्रले जस्तो चिठी एउटा, काम अर्को नगर्नुस्’
प्रकाशित मितिः २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार २०:३७ June 7, 2020
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रधी केपी शर्मा ओलीलाई राजा महेन्द्रले जस्तो चिठी एउटा, काम अर्को नगर्न सुझाव दिएका छन्।
आइतबार विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भागलिँदै सांसद गिरिले परराष्ट्रनीति, विदेशनीति र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले जस्तो चिठी र बोली फरक नगर्न सुझाव सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
‘हामीले भर्खरै हिन्दुस्तानमा मेघनाथले हनुमानलाई अथवा रामले रावणलाई प्रयोग गर्या जस्तै अस्त्र प्रयोग गर्या छौं। अब हामीले प्रयोग गरेको नक्सालाई बिफल हुन नदिन जुन कुटनीति अपनाउनुपर्ने छ। त्यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय सजग छ ?’ गिरिको प्रश्न छ।
‘सीमा समस्यामा नेपाललाई मड्रिडको दूतावासले कुनै सहयोग गर्न सक्छ ? त्यसमा हामीलाई डेनमार्कको राजदूतावासले सहयोग गर्न सक्छ? गरे बरु बेइजिङले नै गर्ला । ध्यान पुर्‍याउनुस्, अगाडि बढ्नु छ’ उनले भने।
बदलिएको परिस्थितिमा गणतान्त्रिक तबरले निर्णय गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। ‘राजा महेन्द्रले जस्तो सुटुक्क एउटा चिठी पठाएर काम गर्ने अर्कोतिर उग्र भाषण गर्ने काम नगर्नुस् ’ गिरिले भने।
यद्धपी राजा महेन्द्र अत्यन्त सफल र दूरदर्शी कुटनीतिज्ञ भएको उनले टिप्‍पणी गरे। यो आफ्नो मात्रै नभएर भारत, चीन र नेपालको सन्दर्भमा जानकारी राख्नेहरुले भनेको र किताबमा लेखेको उनले सुनाए।
त्यस्तै सांसद गिरिले सरकारलाई भारत, चीन र अमेरिकामा मात्रै नेपालको दूतावास राख्न सुझाव दिएका छन्। विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको छलफलमा नेता गिरिले अन्य देशमा राजदूतावास नराखेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए।
‘हाम्रो देशलाई काम लाग्ने देश मन पराए पनि नपराए पनि हिन्दुस्तान हो, चीन हो अमेरिका हो’ गिरिले भने, बाँकी मुलुकमा कुनै समय राजालाई हर सयरपिच्छे दरवार चाहिए जस्तै, अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न राजदूत राख्ने काम छैन।